ဂါဇီး Protected ဆဲလ်ကုမ္ပဏီကျုံ့သွားစေပါတယ်ဖွဲ့စည်းခြင်း | ချုပ်ထားလျက်ရှိသောအာမခံ
ဂါဇီး Protected ဆဲလ်ကုမ္ပဏီ (ကျုံ့သွားစေပါတယ်)
တစ်ဦးကဂါဇီး Protected ဆဲလ်ကုမ္ပဏီ (ကျုံ့သွားစေပါတယ်) 1997 အတွက်ဂါဇီးအတွက်ရှေ့ဆောင်ခဲ့သည်။ မူရင်းရည်ရွယ်ချက်သူတို့ရဲ့အာမခံကုမ္ပဏီများသည်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားနှင့်သူတို့၏ policyholders ထံမှမူဝါဒများသူတို့ရဲ့ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစား (စသည်တို့ကိုဆိုလိုသည်မှာကျန်းမာရေး, အသက်, မီး, အလိုအလျောက်) ခွဲခြားရန်အဘို့အတစ်ရိုးရှင်းတဲ့လမ်းပေးခဲ့ပါသည်။ အာမခံမူဝါဒတစ်ခုချင်းစီကို type ကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဆဲလ်ရှိပြီးတိုင်း policyholder အာမခံမူဝါဒ၏အမျိုးအစားအတွင်းသူသို့မဟုတ်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်သီးခြားဆဲလ်ရှိပါတယ်။
အာမခံမှတပါးအခြားအစက်မှုလုပ်ငန်းသူတို့ကိုအသုံးချနိုင်အောင်အခြားနိုင်ငံများကျုံ့သွားစေပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံမှာမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဗားရှင်းချမှတ်ခဲ့သေးသည်။ ဒါဟာအပြန်အလှန်, 2008 ၏ဂါဇီးကုမ္ပဏီများဥပဒေသူတို့ဖွဲ့စည်းဘယ်လိုစည်းမျဉ်းများနှင့်အတူအားလုံးစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ကျုံ့သွားစေပါတယ်ရဲ့ထူထောင်အကြောင်းကိုဆောင် ခဲ့. , ပျော်။
တစ်ဦးကျုံ့သွားစေပါတယ်များအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးအသုံးပြုမှုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏အသီးအသီးအမျိုးအစားသူသို့မဟုတ်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ဆဲလ်ရှိခြင်းတစ်ခုချင်းစီကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူနှင့်အတူ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဆဲလ်ရှိပါတယ်ဘယ်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေများအတွက်ထီးကဲ့သို့ဖြစ်၏။ သို့သော်တစ်ဦးကျုံ့သွားစေပါတယ်ရုံအာမခံနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများစီမံခန့်ခွဲမှုကန့်သတ်မထားပါ။ တစ်ဦးကကျုံ့သွားစေပါတယ်ရိုက်တည်နေရာ (ဆိုလိုသည်မှာ Limassol တိုက်ခန်းများများအတွက်သီးခြားဆဲလ်သို့ကွဲကွာဆိုက်ပရပ်စ်အိမ်ခြံမြေနှင့်နီကိုစီယာစီးပွားဖြစ်အဆောက်အအုံ) နှငျ့ပတျသကျသောဆဲလ်သို့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုခွဲထုတ်ခြင်းဖြင့်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအတှကျအသုံးပွုနိုငျသညျ။
တစ်ဦးကျုံ့သွားစေပါတယ်၏ဖွဲ့စည်းပုံရဲ့အဓိကအမာခံကုမ္ပဏီ (ကျုံ့သွားစေပါတယ်) နှင့်၎င်း၏သီးခြား "Protected ဆဲလ်" (PC ကိုရဲ့) ပါဝင်ပါသည်။ အဓိကကျုံ့သွားစေပါတယ်များ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုတစ်ဦးချင်းစီကို PC များ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုထံမှသီးခြားထားရှိမည်နေကြသည်။ တူညီသောထုံးစံများတွင်တိုင်းကို PC အခြား PC ရဲ့နှင့်အဓိကကုမ္ပဏီကျုံ့သွားစေပါတယ်ထဲကခြားနား၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပိုင်ဆိုင်မှုရှိပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းအဓိကကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏အကြွေးဖို့ကို PC ရဲ့အကြွေးမရတဲ့ကြွေးမြီများထဲမှလျှင်နှင့်ဥပဒေတစ်ခုတရားရုံးတွင်တရားစွဲနေကြတယ်, အခြား PC ရဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေကြသည်။ ဒါကသူတို့ရဲ့ liabilities များ၏ထိတွေ့မှုအခြားဆဲလ်များကိုကူးသယ်ဆောင်ခံရဖို့အဘို့မိမိတို့သီးခြားဆဲလ်တွေခွင့်ပြုမပြုအတွက်အထီးကျန်နေသောအန္တရာယ်များရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများများအတွက်စံပြဖြစ်ပါတယ်။
ဂါဇီး Protected ဆဲလ်ကုမ္ပဏီ (ကျုံ့သွားစေပါတယ်) အကျိုးကျေးဇူးများ
တစ်ဦးကဂါဇီး Protected ဆဲလ်ကုမ္ပဏီ (ကျုံ့သွားစေပါတယ်) အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုအခွင့်ကောင်းယူနိုင်သည်
• စုစုပေါင်းနိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှု: နိုင်ငံခြားသားကော်ပိုရေးရှင်းရှယ်ယာအားလုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။
• အဘယ်သူမျှမအခွန်ကောက်ခံမှု: ပေးဆောင်ဖို့မအခွန်အခများရှိပါတယ်။ မှတ်ချက်: ကမ္ဘာကြီးဝင်ငွေအခွန်ကိုအမေရိကန်နေထိုင်သူများနှင့်တိုင်းပြည်များတွင်နေထိုင်မည်သူမဆိုမိမိတို့၏အခွန်အေဂျင်စီများအားလုံးဝင်ငွေထုတ်ဖော်ရပေမည်။
• တစ်ခုမှာရှယ်ယာရှင်များ / တစ်ခုမှာဒါရိုက်တာ: တစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင်တညွှန်ကြားရေးမှူးတစ်ဦးတည်းသောရှယ်ယာရှင်ဖြစ်နိုင်သူလိုအပ်ပါသည်။
• သီးသန့်လုံခြုံရေး: အဆိုပါရှယ်ယာရှင်များနှင့်အကျိုးရှိသောပိုင်ရှင်များ၏အမည်များကိုမဆိုအများပြည်သူမှတ်တမ်းများ၌နေကြသည်မဟုတ်။
• အန္တရာယ်များကန့်သတ်: သီးခြားဆဲလ်များအသုံးပြုမှုအဓိကကျုံ့သွားစေပါတယ်များ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုနှင့်အခြားဆဲလ်ကနေအန္တရာယ်များရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအထီးကျန်။
• အဘယ်သူမျှမနိမ့်ဆုံးဝေမျှမယ်မြို့တော်: နိမ့်ဆုံးရှယ်ယာမြို့တော်အဘို့အဘယ်သူမျှမလိုအပ်ချက်ရှိပါသည်။
• အဘယ်သူမျှမစာရင်းစစ်: တောင်းဆိုနေတဲ့စာရင်းစစ်ကျုံ့သွားစေပါတယ်အားဖြင့်သက်ညှာနိုင်ပါသည်။
• အဘယ်သူမျှမအစည်းအဝေးများ: တောင်းဆိုနေတဲ့နှစ်ပတ်လည်ယေဘုယျအစည်းအဝေးများကျုံ့သွားစေပါတယ်အားဖြင့်သက်ညှာနိုင်ပါသည်။
• အင်္ဂလိပ်: ဗြိတိသျှနယ်မြေတွေကိုအမျှဂါဇီးရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကသင်သည်ဘာသာစကား English ဖြစ်ပါတယ်။
ဂါဇီး Protected ဆဲလ်ကုမ္ပဏီ (ကျုံ့သွားစေပါတယ်) အမည်
အဆိုပါကုမ္ပဏီအစကားလုံးများကို "Protected ဆဲလ်ကုမ္ပဏီ" သို့မဟုတ်အတိုကောက် "ကျုံ့သွားစေပါတယ်" တစ်ခုခုနှင့်အတူအဆုံးသတ်ရပေမည်။
တစ်ဦးကကျုံ့သွားစေပါတယ်တဲ့ကော်ပိုရေးရှင်းနဲ့တူတစ်ခုတည်းဥပဒေရေးရာ entity ဖြစ်ပါတယ်။
ကျုံ့သွားစေပါတယ်အဓိကကော်ပိုရိတ်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်သီးခြားပိုင်ဆိုင်မှုနေသော "ဆဲလ်" မဟုတ်သီးခြားဥပဒေရေးရာ entity သော "အမာခံ" ၏ပါဝင်ပါသည်။ ဤသည်ဆဲလ်များကိုအဓိကကုမ္ပဏီနှင့်အခြားဆဲလ်ကနေကွဲကွာနေစဉ်မိမိတို့နာမ၌ကန်ထရိုက်ဝင်မဟုတ်နိုင်သည်ကိုဆိုလိုသည်။ ကိုသာအဓိကဦးချင်းစီသီးခြားဆဲလ်ကိုယ်စားတတိယပါတီနှင့်အတူကန်ထရိုက်သို့ဝငျနိုငျသညျ။ တစ်ဦးကျုံ့သွားစေပါတယ်နှင့်စာချုပ်တစ်ခုသတ်မှတ်ဆဲလ်ကိုယ်စားသို့ ဝင်. လျက်ရှိသည်အဖြစ်ရလဒ်အဖြစ်ကျုံ့သွားစေပါတယ်ကိုယ်တိုင်ကခွဲခြားသတ်မှတ်ရပါမည်။ ကျုံ့သွားစေပါတယ်၏ဥပဒေရေးရာစွမ်းရည်နှင့်အခန်းကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်. အပြည့်အဝထုတ်ဖော်နှင့်တိကျသောဆဲလ်ပညတ်တရားအောက်၌မဖြစ်မနေဖြစ်သကဲ့သို့ဤသည်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
တဦးတည်းကလာပ်စည်း၏အကြွေးများထဲမှဆဲလ်ရဲ့အကြွေးတွေဆပ်ဖို့အခြားဆဲလ် (သို့မဟုတ်အဓိက) ဆန့်ကျင်ဥပဒေရေးရာအရေးယူလို့မရဘူးဒါကြောင့်တစ်ဦးကကျုံ့သွားစေပါတယ်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် liabilities တိုင်းဆဲလ်ပတျဝနျးကငျြတဲ့လက်စွပ်နှင့်အတူသီးခြားဆဲလ်သို့ segregated နေကြသည်။
တစ်ခုချင်းစီကိုဆဲလ်က၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ရှယ်ယာရှင်များ, ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် liabilities ရှိနိုင်ပါသည်။ ကျုံ့သွားစေပါတယ်သာဆဲလ်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအားဖြင့်ရရှိခဲ့သည့်အမြတ်အစွန်းကနေဆဲလ်ရဲ့ရှယ်ယာရှင်များမှခွဲဝေပေးဆောင်နိုင်ပါ။
လျှောက်လွှာအဆိုပါဂါဇီးဘဏ္ဍာရေးန်ဆောင်မှုများကော်မရှင် (FSC) မှတဆင့်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
အကျိုးရှိသောပိုင်ရှင်များနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်အတွက် FSC ပေးရမည်ဖြစ်သည်, ဒါပေမယ့်အများပြည်သူမှတ်တမ်းများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ထို့အပြင်မှတ်ပုံတင်ရှယ်ယာရှင်များများ၏အမည်များ၎င်း FSC မှထုတ်ဖော်ကြသည်, သို့သော်အများပြည်သူမှတ်တမ်းများတွင်ထည့်သွင်းမထားပေ။ သို့သော်ဒါရိုက်တာများများ၏အမည်များအများပြည်သူမှတ်တမ်းများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ခွင့်ပြုချက်ပြီးနောက်တစ်ဆဲလ်အထူး resolution ကို၏ကျမ်းပိုဒ်နဲ့အတူကျုံ့သွားစေပါတယ်အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးထားသည်။
ကျုံ့သွားစေပါတယ်သာဒါရိုက်တာတဦးတည်းဘုတ်အဖွဲ့ရှိပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းစီကို PC ရဲ့ဒါရိုက်တာမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဘုတ်အဖွဲ့ရှိသည်မဟုတ်နိုင်ပါ။
ဒါရိုက်တာသီးခြားနှင့်တစ်ဦးချင်းအခြားဆဲလ်များကို '' ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် liabilities ကနေနှင့်အမာခံထံမှဖော်ထုတ်ဆဲလ်များ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုနှင့် liabilities ထိန်းသိမ်းရန်ရမည်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, ပညတ္တိကျမ်းရှယ်ယာမြို့တော်တစ်ကျုံ့သွားစေပါတယ်များအတွက်ဖွဲ့စည်းပုံမှာနိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုသတ်မှတ်မထားဘူး။ ပုံမှန်ကော်ပိုရေးရှင်းအလေ့အကျင့်မရှိ, မဲပေးခွင့်နှင့်အတူ (ရှေးနုနိုင်ပါတယ်) ရှယ်ယာမြို့တော်တစ်ခုချင်းစီကိုဆဲလ်များအတွက် core နဲ့အမျိုးအစားမခွဲခြားထားသောရှယ်ယာများအတွက်သာမန်ရှယ်ယာခွဲခံရဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
တဦးတည်းကသဘာဝလူတစ်ဦးသို့မဟုတ်တစ်ဥပဒေရေးရာ entity နိုင်ပါတယ်ခနျ့အပျထားလျှင်တစ်ဦးကကုမ္ပဏီ၏အတွင်းရေးမှူးလိုအပ်ပေမယ့်မပေးပါ။
တစ်ဦးကကျုံ့သွားစေပါတယ်ဂါဇီးအခွန်အဓိကအနေဖြင့်စုစုပေါင်းအမြတ်ငွေများနှင့်ပေါင်းစပ်တိုင်းဆဲလ်အပေါ်ချမှတ်ထားရာတစ်ခုတည်းအခွန်ထမ်းဥပဒေရေးရာ entity အဖြစ်ကုသနေပါတယ်။
လက်ရှိတွင်အဆိုပါကော်ပိုရေးရှင်းအခွန်နှုန်း (နိုင်ငံခြားရှယ်ယာရှင်များကပိုင်ဆိုင်နေတဲ့ကျုံ့သွားစေပါတယ် 0% လိုမျိုး) Non-နေထိုင်သူကုမ္ပဏီများအတွက် 100% ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးကပေါင်းစပ် (core နဲ့အားလုံးဆဲလ်တွေ) အခွန်ပြန်လာသည့်အခွန်အာဏာပိုင်များကနှင့်အတူတင်သွင်းခံရဖို့လိုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါအခွန်ပြန်လာအခွန်နှစ်ကုန်ကနေတစ်နှစ်ဆယ်ရက်အတွင်းတင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။
တိုင်းကျုံ့သွားစေပါတယ်အဆိုပါ core နဲ့ဆဲလ်များအတွက်စာရင်းကိုင်မှတ်တမ်းများကိုစောင့်ရှောက်ရကြမည်။ စာရင်းကိုင်မှတ်တမ်းများလက်ခံနိုင်ဖွယ်စာရင်းကိုင်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်တွေ့ဆုံရန်ရမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါစာရင်းကိုင်မှတ်တမ်းများမဟုတ်သလိုဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းကိုမအများပြည်သူရရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါမှတ်တမ်းများဘယ်နေရာမှာမဆိုထားရှိမည်နိုင်ပါသည်။ သူတို့ဟာကအနည်းဆုံးခြောက်နှစ်ဘို့စောင့်စေရပါမည်။
ဘဏ္ဍာရေးထုတ်ပြန်ချက်များတိုင်းဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင်များအတွက် core နဲ့ဆဲလ်အကောင့်ပေါင်းစပ်ပြီးလိုအပ်သည်။
စာရင်းစစ်လိုအပ်သည်, ဒါပေမယ့်ကျုံ့သွားစေပါတယ်ရဲ့စာရင်းစစ်ကင်းလွတ်ခွင့်တစ်ရှယ်ယာရှင်များ '' resolution ကိုဖြတ်သန်းနေဖြင့်တစ်ဦးစွန့်လွှတ်ရယူနိုငျသညျ။ သက်ဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင်စတင်ရှေ့တော်၌ထို resolution ကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလွန်ရမည်ဖြစ်သည်။
သို့သျော "ကြီးမားသောကုမ္ပဏီများက" ဒီစွန့်လွှတ်ဖန်တီးလို့မရပါဘူး။ တစ်ဦးကကြီးမားတဲ့ကုမ္ပဏီယခင်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက်အောက်ပါ2အခြေအနေများနှင့်ကြိုတင်တဦးတည်း၏3တွေ့ဆုံအဖြစ်သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်:
• 50 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုဝန်ထမ်းများကိုပျမ်းမျှအရေအတွက်သည်ထားရှိခြင်းသည်,
• 6.5 သန်း GBP ၏နှစ်စဉ်လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်ရှိခြင်း,
• 3.25 သန်းပေါင်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုတဲ့အသားတင်လက်ကျန်ရှင်းတမ်းရှိခြင်း။
စုစုပေါင်းနိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုမရှိအခွန်, privacy ကို, တဦးတည်းရှယ်ယာရှင် / ဒါရိုက်တာသီးခြားဆဲလ်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ၏အောက်ပိုင်းအန္တရာယ်များကိုမျှလိုအပ်တဲ့ရှယ်ယာမြို့တော်နှင့်အင်္ဂလိပ်တရားဝင်ဘာသာစကားဖြစ်ပါသည်: တစ်ဦးကဂါဇီး Protected ဆဲလ်ကုမ္ပဏီ (ကျုံ့သွားစေပါတယ်) အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုအခွင့်ကောင်းယူနိုင်ပါတယ်။